साथीको जन्मदिन मनाउन गएका युवा उतै मृ त फेला परे,कसले मा र्यो त उनलाई ? (पूरा भिडियो हेर्नुस्) - ABNews Nepal
साथीको जन्मदिन मनाउन गएका युवा उतै मृ त फेला परे,कसले मा र्यो त उनलाई ? (पूरा भिडियो हेर्नुस्)
Dec 12, 2021 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, latest ramailo samachar, taja khabar, taja khabar nepal, tajakhabar
एक हप्ता अघि दाङको घोराहि बजारमा रहेको फ्रेन्ड एण्ड फेमिली होटलमा गणेश पौडेलको शव फेला परेको थियो । मंसिर १५ गते गणेशका साथी नबिनको जन्मदिन सोही होटलमा मनाइएको थियो । गणेश पनि सोही होटलमा साथिको जन्मदिन मनाउन भनी गएका थिए । जन्मदिन मनाएर गणेश, नवीन लगाएत करिव १५ जनाको समूह सोही होटलमा सुतेको बुझिएको छ । सगैँ सुतेका उनिहरु बिहान भने गणेश मृ’त अवस्थामा भेटिएको उनिसगै जन्मदिन मनाउन गएका साथिहरुको भनाई थियो ।
गणेशका केही साथिहरु र होटल संचालकहरुले गणेशको परिवारलाई बताए अनुसार बिहान ४ बजे तिर गणेश भुईमा पल्टी रहेको भेटेको बुझिएको छ । उनलाई रक्सी लागेको भनी उनका साथिहरुले रक्सी छुटाउन भनी पानी छ्यापेको पनि बुझिएको छ । पानी छ्यापेर उनलाई कोठा भित्र लगेर सुताएको खुल्न आएको छ । गणेशको परिवारका अनुसार उनको टा’उकोमा चो’ट लागेको बताए थिए। तर होटलका संचालकले भने माथी बाट झरेर चो’ट लाएको हुन सक्ने बताएका थिए ।
अहिले गणेशका थुप्रै साथिहरु मिडियामा आएका छन । उनिहरु गणेशका केही सानै देखीका साथिहरु हुन भने केही स्कुल, कलेज पढ्दाका साथिहरु रहेका छन । उनिहरुले बताए अनुसार जन्मदिन मनाउन भनी गणेश गएको भनिएको साथिहरुलाई आफुहरु नचिन्ने बताए । उनिहरुका अनुसार प्राय आफुहरु सगै हिड्ने, डुल्ने गरेको भएता पनि जुन जन्मदिन मनाउन गएको भनिएको छ उक्त साथिहरुसगँ आफुहरुको चिनजान नभएको उनहरुले बताएका छन ।
गणेश कहिल्यै झगडा स्वभाव नभएको उनिहरु बताउँछन । त्यसैले पनि उक्त दिन झ’गडा भएर ह’त्’या भएको जस्तो आफुहरुलाई नलागेको उनिहरुको भनाई छ । गणेशले कहिल्यै कसैसगँ दु’श्म|नीको भावना नराख्ने गरेको उनिहरुको भनाई छ । जन्मदिनमा गएको मध्ये एक जना आशिष् भन्नेलाई आफुहरुले चिनेको बताए । तर उक्त ब्याक्ती आफुहरु सगै पढेको साथी नभै जुनियर भएको उनिहरुको भनाई छ । अगिले उस्को मृ’त्यु र’हस्यमय नै देखिएको र ह’त्’याको सं’का गर्न सकिने ठाउँ रहेको उनिहरुले बताए ।
आफुहरु गणेशको न्यायको लागि अब उस्को का’जकिरिया को काम सकिने बित्तिकै देखि आवाज उठाउने बताए । उनिहरुले प्रहरीलाई पनि अ’नुसन्धान गरि कुनै पनि कुरा कसैको पक्ष बिपक्षी नभै सत्यतथ्य रुपमा बाहिर ल्याइदिन आग्रह गरेका छन । साथै आफुहरुले पनि कसरी सकिन्छ आफ्नो साथिलाई न्याय दिन शान्तिपूर्ण रुपमा तर शसक्त आवाज उठाउने बताएका छन । साथै कोहि दोषी भेटिए कानुनी सजायको लागि आफुहरु सकेसम्म प्रयास गर्ने बताए ।
भिडियो हेर्नुस :- https://youtu.be/k0F2FHhiClI
श्रीमान यसरी बेपत्ता,आमा छो,रिलाई घरबाट निकाले ,अहिले यस्तो रुवाबासि (हेर्नुस् भिडियो )
सिन्धुपाल्चोक बाट काभ्रे आउंदै गरेको जन्ती बाेकेकाे बस दुर्घटना